Shina: Sombin-Tantara Noforonina Fohy no Nitazonana Ilay Mpisiokantserasera Monina Ao Beijing · Global Voices teny Malagasy
Shina: Sombin-Tantara Noforonina Fohy no Nitazonana Ilay Mpisiokantserasera Monina Ao Beijing	Voadika ny 18 Novambra 2012 21:04 GMT
Zarao: Mpisera Twitter ao Beijing @Stariver no notànana nanomboka tamin'ny 7 Novambra 2012, tamin'ny fanombohan'ny Kongresy Nasionaly faha-18n'ny Antoko Komonista Sinoa. Araka ny filazan'ny namany izay nitsidika ny fianakaviany tamin'ny 17 Novambra, ny fialàna bala mody nataon'ny polisy dia “voarohirohy ho nanaparitaka vaovao tsy marina sy mampihorohoro tamin'ny aterineto” i @stairver.
Angamba mikasika ilay sioka “sombin-tantara bitika noforonina” izay mangala-tahaka fahantany ilay sarimihetsika Hollywoodiana “Final Destination” tamin'ny 4 Novambra 2012 izany mody lazaina fa vaovao “diso sy mampihorohoro” izany. Mikasika ny Kongresy faha-18 ilay lahatsoratra:
#Sioka momba ny Voina #Tandremo sary mampihoro-koditra “Final Destination 6” no fantatra fa hivoaka tsy ho ela. Nianjera tampoka ny Lapan'ny vahoaka. Namoy ny ainy teo noho eo avokoa ireo olona maherin'ny 2.000 tao am-pivoriana, ankoatra ny 7 tamin'izy ireo. Kanefa namoy ny ainy tao anatin'ny misitery ihany koa izy fito ireo avy eo. Lalao avy amin'Andriamanitra ve izany, sa fahatezeran'ny Fahafatesana? Ahoana ny fomba amoahan'ireo isa 18 hafahafa ny vavahadin'ny Helo? Tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny 8 Novambra. Mampiseho anao seho tena manafintohina tanteraka!
Araka ny filazan'i @mozhixu [zh], ny tena anaran'i @stariver dia Zhai Xiaobing (翟小兵）teraka tamin'ny 1976. Monina ao amin'ny distrikan'i Miyun, Beijing ankehitriny. Mpitantana orinasa momba ny famatsiam-bola izy, nahavita ny fianarany tao amin'ny Oniversite Peaking ary mpiasa teo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao izy taloha.
Tsy nilaza ary namoaka ny fisamborana azy mihitsy ny naman'ny @Stariver sy ny fianakaviany satria nanantena fa hoafahana izy aorian'ny faha-18 taonan'ny Kongresy tamin'ny 14 Novambra. Kanefa mbola tsy nisy famantarana mihitsy amin'ny mety ivoahany.
Mpisera Twitter @wenyunchao mipetraka ao Hong Kong nikarakara fanentanana fanangonan-tsonia [zh] tamin'ny aterineto, miantso ho amin'ny fanafahana azy amin'ny 17 Novambra 2012. Nilaza momba an'i Liu Yanping ny fanambarana amin'ny fanentanana izay nanipika hoe:
‘Ity nolazaina fa “fampielezana vaovao tsy marina sady mampihoron-koditra” dia mifandraika amin'ny lalàna laharana 291: “famoronam-baovao mampihorohoro miresaka fanafihana baomba, taharo shimika sy taratra radioaktifa izay miteraka fanelingelenana eo amin'ny filaminana ara-tsosialy”. Raha tsaraina amin'ny votoatin'ny sioka, efa voalaza fa tantara foronina ka tsy hiteraka tahotra. Tsy hiteraka fanelingelenana sosialy ny vokatr'izany. Hafahafa ny fanamelohana.’ Manantena izahay fa hanana fahaiza-mampitokelaka ny polisin'i Beijing ary tsy hamorona toe-javatra goavana amina resaka bitika. Aza simbana indrindra re ny lazan'ny mpitarika vaovao taorian'ny Kongresy faha-18n'ny antoko. Mahametra izao fiampangana tsy misy fotony olo-pirenena mampihatra ny fahalalaha-pitenenany izao. Mandrisika ny famoahana avy hatrany ny mpisera Twitter @stariver izahay.
Mpisera Twitter hafa Twitterer @Badiucao namorona afisy momba ny “Final Destination 6″ mba hamazivaziana ilay fisamborana hafahafa:
Tantaran'ny Shina farany 3 andro izayAzia AtsinananaSary Mampiseho Ny Fahasamihafana Ara-kolontsaina Eo Amin'i Hong Kong sy Shina
6 andro izayAzia AtsinananaManararaotra ny lazan'ny kolikolin'i Shina Tanibe ireo mpisoloky hanambakàna ny mponina ao Hong Kong
7 andro izayAzia AtsinananaTrondro maty an-drano ireo tao Tianjin ireo raha amin'ny filazana ofisialy, hoy ny fiheveran'ny mpiserasera
Fisamborana sy faneriterenaHafanam-poLalànaMediam-bahoakaSolovavaFeo voarahona